Soosaarayaasha Xarunta Wax Soo Saarka | Xarunta Waxsoosaarka Shiinaha ee Shiinaha & Alaab-qeybiyeyaal
Nidaamka Navigation GPS
Kani waa mashruuc isku imaatin PCB ah oo loogu talagalay nidaamka hagitaanka GPS ee loo isticmaalo mootada. Warshadaha baabuurta waxay leeyihiin shuruudo aad u adag marka laga hadlayo howlaha iyo howlaha, tayada iyo waqtiga la keenayo. Kuwaas oo dhammaantood ahmiyado iyo udub dhexaad u ah xeerarka hawlgallada Asteelflash, adduunka oo dhan. Maaddaama aan nahay shirkad elektaroonig ah iyo soosaaraha PCBA-ga, annaga, haddaan nahay Pandawill, waxaan bixinnaa adeegyo tayo sare leh oo xagga injineernimada ah, qaabeynta iyo qaabeynta ah.
Kaamerada isboortiga ee banaanka
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee alaabada kamaradda isboortiga banaanka. Macaamiisha elektarooniga ah, laga bilaabo alaabada maqalka ah ee la gashado, ciyaaraha ama xitaa xaqiiqda dalwaddii, dhammaantood way sii kordhayaan. Dunida dhijitaalka ah ee aan ku nool nahay waxay u baahan tahay xiriir heer sare ah iyo koronto sare iyo awoodo, xitaa alaabada ugu fudud, awood siinta isticmaaleyaasha adduunka oo dhan.
Telemetry-waqtiga dhabta ah ee shaqaalaha
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB-ga loogu talagalay waqtiga dhabta ah ee telemetry loo isticmaalo shaqaalaha. Macaamiisha elektarooniga ah, laga bilaabo alaabada maqalka ah ee la gashado, ciyaaraha ama xitaa xaqiiqda dalwaddii, dhammaantood way sii kordhayaan. Dunida dhijitaalka ah ee aan ku nool nahay waxay u baahan tahay xiriir heer sare ah iyo koronto sare iyo awoodo, xitaa alaabada ugu fudud, awood siinta isticmaaleyaasha adduunka oo dhan.
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee nidaamka xakamaynta khadadka tareenka. Warshadaha warshadaha waxay taariikh ahaan ahaayeen mid ka mid ah qeybta ugu weyn ee ay adeegto Pandawill hadana waxaan hada markhaati ka nahay Internetka Waxyaabaha, iyadoo si gaar ah isha loogu hayo Internetka Warshadaha ee Waxyaabaha (IIoT), kaas oo keenaya isku xirnaanshaha iyo otomatiga warshadaha iyo shirkadaha ku xeeran. adduunka.
Guddiga xakamaynta farsamada calaamadaha
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee guddiga xakamaynta calaamadaha. Warshadaha warshadaha waxay taariikh ahaan ahaayeen mid ka mid ah qeybta ugu weyn ee ay adeegto Pandawill hadana waxaan hada markhaati ka nahay Internetka Waxyaabaha, iyadoo si gaar ah isha loogu hayo Internetka Warshadaha ee Waxyaabaha (IIoT), kaas oo keenaya isku xirnaanshaha iyo otomatiga warshadaha iyo shirkadaha ku xeeran. adduunka.
Qalabka helitaanka xogta ee IoT
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee qalabka helitaanka xogta IoT. Laga soo bilaabo adeegyada injineernimada iyo wax soo saarka illaa iyo shirkii guddiga wareegga ee daabacan, annaga, shirkadda Pandawill EMS, waxaan u keennaa xalal khabiir ku ah aaladaha Internetka Waxyaabaha.
Qalabka daaweynta laser
Kani waa mashruuc isku imaatinka PCB ee qalabka bogsashada laser-ka. Raad-raac ah ISO 13485 oo la xaqiijiyay inuu taageerayo shuruudahaaga wax-soo-saar ee mid ka mid ah warshadaha ugu adag: Awoodeena caafimaad waxay daboolayaan qaybo kala duwan oo gaar ah oo ka imanaya qalabka baaritaanka ilaa qalabka gacanta, laga soo bilaabo shirkii guddiyada wareegsan ee daabacan (PCBA) ilaa shirkii dhammaaday.
Kombiyuutarka Ultrasound guddiga daaweynta jirka